Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah, qaybta 20) Sideed U Noqon Kartaa Qof Guulaysta? | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah, qaybta 20) Sideed U Noqon Kartaa Qof Guulaysta?
Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah, qaybta 20) Sideed U Noqon Kartaa Qof Guulaysta?
Mar 11, 2017ARRIMAHA BULSHADA, HORUMARKA DALKA, WARAR
Sidee baan ugu gulaysan karaa nolosheyda una noqon karaa qof guul ka soo hooya wax walba oo uu u dhaqaaqo. Waxaad isku daydaa in aad ku gulaysato arimahaaga khaaska ah ee ku quseeya adigoo naftaada ku xiraya Allah swt, waxuuna yiri ( Allah ma badalo qoom ilaa ay ayagu badalaan naftooda). Ku kalsoonow naftaada adigoo allah kaashanaaya kuna kalsoon wax walba oo ad qabanayso tala saaranaaya asaga. waxaa is waydiin mudan seebaan u noqon karaa qof naftiisa ku kalsoon?Waxaad barataa naftaada miisaan caqligaaga maskaxdaada waxa ku jira gudaheeda miisaan saar oo noqo qof naftiisa yaqaan ha ku xirin naftaada wax kaliyah in badan waxad furtaa maskaxdaada oo aad bilowdaa in aad kaga shaqaysiiso oo aad waxyaabo badan shaqadeed udhiibto waxaad kaashataa saaxiibadaada wanaagsan ee kuu sheegaya waxaad ku wanaagsantahay waayo saaxiibkaa waxuu naftaada ka ogyahay wax aad ogayn. Tusaale ahaan wuxuu ogyahay waxyaabaha aad ku fiicantahay ee aad ka soo bixi karto, saaxiib wanaagsan waa midka ku fara khayrka , xumahana kaa reeba.
Waxaad goobo galisaa ama aad qortaa waxyaabaha aad qaban karto ee aad awooda u leedahay oo dhan haba ahaato hami fog oo aan la gaari karin qor oo isku day in aad sida ugu dhakhsiyaha badan uga rumaysid arintaas hana ku dayan sida dadka qaar ay yiraahdaan waxaas iyo waxaas hala qabto. haa insha allah waanu qaban oo ayna bartiiba ka qaadin waa in aad markiiba ficil galiso waxaad tiri aadna ku miisaanto naftaada oo aad miisaanka saarto waxaas markiibana aad ku dhaqaaqdo hana isku dayin wax aad maanta qaban karto in aad bari u dhigato .
Isku day in aad jeclaato waxaa aad qabanayso oo aadna ka tagin oo ka miro dhaliso naftana ku amartid in ay qabato oo ayna gooygooynin marnaba arintaas ilaa ay ka miro dhaliso .
Hadii aad waxaas ku fashilanto oo aad qaban kari waydo fashiladaasi way tagtay adna waad joogtaa. isku day in aad dhamayso oo aad daawayso oo aad dhihin iga daa waxba ma qaban kariyee qof walba wuxuu leeyahay waxyaabo uuna qaban karin oo ay naftiisu ku fashilmato qofka bini aadamka ah mar walba ma guulaysto guuldaraduna mar walba waxay balan la dhigataa guusha oo ay garab carartaa .
Waxad aqoonsataa ceebaha naftaada ku qor wax walba oo naftaadu ceeb leedahay oo ay ku fashilantay hagaajinteeda qor oo isku day in aad daawayso oo aad iska reebto markaad qorto kadib dul istaag oo isku da’y in aad naftaada ka jarto oo aad ka gulaysato oo aad iska dayso ceebahaas oo dhana aad ka suusho .Waxaad bilawdaa sidii aad u daawayn lahayd wax walba oo aad ku fashilanto ha ka harin waa lagama maarmaan qofkastaa in uu ogaado waxay naftiisu qaban karto iyo waxayna qaban karin waxay ku xuntahay iyo waxay ku wanaagsantahay waxay ku fashilantay iyo waxay ku guleesatay waa in aad qortaa kadibna iska daawaysaa oo aad u doonto daawo aduunka wax aan daawo lahayni ma jirto waxuunbaa ugu daran qofka ceebihiisa iska indha qabta iyo tay u sheegaan macalimiinta saaxiibadiisu ee gees intuu iska mariyo asagu qumane isla noqda qofkaasi ma gulaysto waligiis. Waxaad ogataa waxa aad u nooshahay ee aad u socoto in ay tahay naftada oo aad wanaajiso iyo ayadoo aad ogaato meelaha dhamaan ay daciifka ka tahay iyo in aad ogaato dhamaan meelaha aad ku guulaysato ee aad ogtahay naftaadu in ay ku tahay mid ka adag maah maah ayaa waxay tidhaa ( waxaad bilowdaa dhamaadkiisuna wuu saxmaa). Waxaad ogaatay naftaadii waxyaabihi ay ku fashilmaysay iyo waxyaabahay ku guulaysanaysay waadna saxday waxii qaldanaa . Waa in aad ahaato qof dagan ahna la saaxiib dad daganaansho u dhashay taasi waxay kaa caawinaysaa in aad ku gulaysato wax walba hadii aad naftaada ilaaliso oo aad wax walba ku dhamayso daganaansho naftaada aad ka saxdo wax walba oo daciifnimo iyo xumaan ah aadna la saaxiibto qof wanaagsan oo dagan oo kugu dhiiri galiya mar walba hami sare iyo hiigsi dheer waxaad noqonaysaa qof naftiisa wax tara dadkiisa wax tara dalkiisa wax tara waalid noqon kara tusaale iyo tusmo umadna bad baadin kara waxaad noqonaysaa shakhsiyad aad u sarayso oo umada islaamka iyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa ka muuqda oo ka magacaaban .
Hadii aad nolosha noqon mid mar walba hamiya oo hadaf leh oo masuuliyad iska saaro oo mar ka fa’iidaysan khaladaadkiisa oo aan naftiisa aqoon ceebteeda iyo manfaceedaba waa sida ilmaha yar ee aan waxba kala garanahayn noloshiisuna waa uun iska noole . Waa in aad noqoto qof mar walba ka shaqaysiiya naftiisa iyo maskaxdiisa oo isticmaala maskaxda uu rabi ina siiyay oo baaxad wayn leh oo aynaan qiyaasi karin wax tarkeeda waa in aad ahaato qof mustaqbalka ka fakara oo ay ku jirto hami sare iyo hormar gaara. Waxaad mar walba xasuusataa ducada Allah swt in aad mar walba in uu ku wanaajiyo ka barido oo aad adna dadaalka badisid oo aad naftaada badali karto.
waa in aad inta badan waxaad jeceshahay ka shaqayso aadna isku daydo in aad waxaas jeceshahay aadna ku dadaasho kuna hamido sidii aad u xaqiijin lahayd. Waa in aad sawirato hadafkaaga oo aad is hor dhigto aadna ka muujiso guul aad u saraysa ayadoo aad naftaadana
tahay mid ku kalsoon hore ayaan ku soo sheegay.
Previous PostMuuqaal: R/wasaare. Khayre oo maanta Dhagax Dhigay Xarun muhiim ah iyo Khudbadihii laga soo jeediyey goobta!! Next PostMUUQAAL: Universal Tv oo Baahiyey Warbixin Dhegaha looga Tumay C.wali GAAS iyo Diyaarada uu Saaran yahay!